लैंगिक असमानताको अर्को पाटो - समय-समाचार
२१ श्रावण २०७६, मंगलवार ०६:२४
हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाबारे समाचार हामीले दिनहुँ सुनिरहनुपरेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा त यस्ता घटनाले निकै ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । पुरुषको तुलनामा महिला बढी पीडित छन्, पुरुष पनि पीडित नभएका होइनन् । हुन त प्रतिशतको हिसाबमा महिला बढी नै पीडित भएको तथ्यांक छ । यसो भन्दै गर्दा थोरै प्रतिशत भए पनि पीडित बनेका पुरुषको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
महिला पीडित भएको घटनामा अधिकांश पुरुष नै पीडक रहेको भेटिने गरिएको छ भने केहीमा महिला नै महिलाको पीडक भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । तर नेपाली समाजमा यस्ता पुरुष पनि छन्, जो महिलाबाट पीडित छन् । महिलाका विषय भन्नेबित्तिकै सान्त्वनाको भाव पोखिनु र पुरुषलाई मात्र दोषी देख्नुले पनि महिलापीडित पुरुषहरूको समस्याको सम्बोधन हुन गाह्रो भइरहेको छ ।
शारीरिक र मानसिक पीडा दिने महिला वा पुरुष दुवै हुन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । समाजमा यस्ता महिला पनि छन्, जो पुरुषलाई विभिन्न यातना दिएर पीडा दिइरहेका छन् । जस्तै- विदेशमा रगत-पसिना बगाएर कमाएको पतिको सम्पत्तिलाई मोजमज्जामा उडाउनु, परपुरुषसँग सम्बन्ध बढाउनु र उसैलाई सम्पत्ति र जोवन सुम्पनु आदि । प्रहरी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल आउँदा पत्नी र रगतपसिनाको कमाइ दुवै गुमाएर घरको न घाटको भएका पीडित पुरुषको उजुरी प्रशस्त भेटिन्छन् ।
प्रहरीमा उजुरी दिँदा पनि महिलाले दिएका बयानलाई बढी प्राथमिकता दिइनु र पुरुषलाई जहिले पनि हिंस्रक र पीडा दिने व्यक्तिका रूपमा मात्र विश्लेषण गरिनुले पनि महिलापीडित पुरुष झन् पीडित बन्दै गएका हुन् ।
केही समयअघि तेह्रथुमको एउटा समाचार आएको थियो । दोर्ण भुजेलकी पत्नी मन्जुलाले पतिले कमाएको करोडौं रुपैयाँ लिएर बेपत्ता भएको । रोजगारको सिलसिलामा १२ वर्षअघि साउदी अरब पुगेका द्रोण दिनरात नभनी कमाएको ५० लाख, १५ तोला सुन र सातवटा मोबाइल लिएर बेपत्ता भएकी पत्नीबाट सम्पत्ति फिर्ता गराउन नेपाल आएर कानुनी बाटो रोज्न पुगे । अहिले उनको गाउँमा रहेको घरबाहेक सम्पत्तिको नाममा केही छैन ।
यस्तै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत दीपक (नाम परिवर्तन) को सानो र सुखी परिवार अहिले भताभुंग भएको छ । केही वर्षअगाडिको भरिपूर्ण उनको जीवन यतिबेला शून्यतामा झरेको छ । गाउँमा रहेकी पत्नीले बजारमा कोठा लिएर राख्न अनुरोध गरेपछि गाउँमा भएको जग्गाजेथा बेचेर सहरमा घर र घडेरी किनेर पत्नीलाई पसल खोलेर राखिदिए । आफ्नो सरकारी जागिरबाट आएको तलब भत्ता पनि आफूलाई केही बचाएर सबै पत्नीलाई पठाए ।
लामो समय घर नआउँदा पनि फोनबाटै सन्चो-बिसन्चो र व्यवहारबारे सोध्ने गर्दा रहेछन् । सोध्दा त सब ठीकठाक छ भन्ने जवाफ पाउँदा रहेछन् । जब उनी केही महिनापछि घर आए, छाँगाबाट खसे झैं भए । न पत्नी न जग्गाजमिन । सबै आफ्नो नाममा पारेर पत्नी गायब । धेरै खोजतलास गर्दा पनि कतै नभेटेपछि अहिले उनी यत्तिकै सुस्ताएका छन् । जीवनभर गरेको कमाइको नाकमुख नदेख्दा जिन्दगी शून्यमा झरेको छ उनको ।
यो त नेपालभित्रको कुरा भयो, नेपालबाहिरको कथा पनि उस्तै छ । हाल अमेरिकामा रहेका उनको सम्बन्ध पत्नीसँग केही समय राम्रै बित्यो । तर विस्तारै पतिसँगै बाहिरी पुरुषसँग पनि पत्नीको सम्बन्ध रहेको कुरा खुल्यो । यही विषयमा उनले धेरै सम्झाउन खोजे, तर विदेशको ठाउँ पुरुषभन्दा पनि महिलाको बढी सुनुवाइ हुने । उनले सम्झाउन खोज्दा पुलिस बोलाइदिने धम्की दिएपछि आफ्नै पत्नीसँग अरूसँग लागेको टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही सकेनन् ।
विस्तारै उसले आफू ऊसँग बस्न नसक्ने भन्दै पारपाचुके मागेपछि भने उनले राहतको सास फेरे । तर विदेश र नेपाल दुवैमा सम्पत्तिमा हक लाग्यो । विचरा अधबैंसेभन्दा माथि पुगेको उनको उमेर । अब जिन्दगीभर त्यही कमाइले बाचौंला, बसौला, बुढेसकालमा नेपाल गएर यही सम्पत्ति भोगचलन गरौंला भन्ने सपना बोकेका उनको सबै सपना चकनाचुर भयो । कमाइको आधा हिस्सा दिनुप¥यो, बाँकी आधा ऋण तिर्दै सकियो । अनि बुढेसकालमा भए पनि रातदिन घन्टी हान्न बाध्य छन् अहिले उनी यतिबेला ।
यसरी वर्षौंसम्म पीडित बनेका उनको मानसिक अशान्तिको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? महिला भन्दैमा सबै उसैको पक्षधर हुने र दोषी को हो ? साँचो र झूटोे के हो ? छुटाउन नसक्दा पनि यस्तो हुने गर्छ । कसैको जिन्दगीसँग नै खेलबाड गर्ने मनसायले आएकालाई किन दिने आधा सम्पत्ति पनि ? हिजोआज यो बहसको रूपमा चल्न थालेको छ । पुरुषको जायजेथालाई भोगचलन गरेर आफू महलमा र उनीहरूलाई सडक पु¥याएका धेरै उदाहरण समाजमा छन् ।
अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय पुरुष वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताले महिलाकै नाममा पैसा पठाउने र जग्गा खरिदबिक्री गर्ने काम पनि महिलाकै नाममा हुने गर्छ । पतिले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको सम्पत्ति पतिले दुरुपयोग गरेका केही घटना पनि आउन थालेका छन् । जसका कारण परिवारमा द्वन्द्वको सुरुवात भई परिवार नै तहसनहस बन्न पुग्छ ।
क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट विजय ज्ञवाली पनि समाजमा पुरुषविरुद्ध हुने हिंसाबारे खासै चर्चा नहुने स्वीकार्छन् । उनका अनुसार पुरुष हिंसाबाहिर नआउनुको कारण कानुनको जटिलता, पुरुष अहं र लोकलाज, छोराछोरीसित टाढा हुनुपर्ने त्रास, पुरुष हिंसाबारे जानकारीको अभाव, पुरुषलाई सजिलै दोष जान सक्ने सामाजिक वातावरण आदि हुन् । जसले गर्दा पीडित पुरुष विभिन्न मानसिक विचलनबाट पीडित हुन्छन् जस्तै ः आत्मविश्वासको कमी, अनिद्रा, आफू दोषीको अनुभव गर्नु, रक्सी र लागूपदार्थको कुलत हँदै गम्भीर अपराध गर्नसम्म उद्यत् हुने र अन्त्यमा आत्महत्याको बाटो रोज्ने गर्दछन् । यद्यपि पछिल्लो समयमा कानुनी उपचारमा भने पुरुषका मुद्दालाई पनि सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
लैंगिक समानतामा अझै पनि प्रस्टता पाइँदैन । महिला हिंसाविरुद्धको लडाइँ र पुरुष हिंसाविरुद्धको लडाइँ एकअर्काको लडाइँ होइन । यो सिंगो हिंसाविरुद्धको लडाइँ हो । महिला पुरुषभन्दा पनि पीडित र पीडक को हो भन्ने छुट्ट्याउन अत्यावश्यक छ । महिला भन्दैमा उसका कुरामा भावनात्मक संवेग प्रस्तुत गर्न र पुरुष भन्नेबित्तिकै आवेग प्रस्तुत गर्न जरुरी छैन । यहाँ लाखौं लाहुरे पनि उठिबासमा परेका छन् । त्यसैले दोषी को हो त्यो निक्र्योल हुन जरुरी छ । ( http://annapurnapost.com/news/109778 )